लकडाउनमा भुक्तानीलगायत कारोबारमा समस्या भयो ? यी हुन् डिजिटल पेमेन्टका सजिला विकल्प - Technology Khabar
» लकडाउनमा भुक्तानीलगायत कारोबारमा समस्या भयो ? यी हुन् डिजिटल पेमेन्टका सजिला विकल्प
विश्वभर कोरोनाभाइरसको महामारी र त्रासका बिच विभिन्न देशहरुमा लकडाउनको अवस्था छ । नेपाल पनि हिजो मंगलबारदेखि आगामी १८ गतेसम्म लकडाउनमा रहेको छ । जसले गर्दा करोडौं मानिसहरु घरभित्रै रहन बाध्य भएकाछन् ।
यस्तो बेलामा मानिसहरु सकेसम्म बाहिर जानबाट बच्ने र आफ्ना दैनिक कार्यहरु समेत सहजरुपमा गर्न सक्दछन् । त्यसको लागि सहज माध्यम भनेको डिजिटल प्लेटफर्महरुको प्रयोग हो ।
केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अघिल्लो सातादेखि नै मानिसहरुलाई डिजिटल भुक्तानीलाई प्रबद्र्धन गरिरहेको छ भने विभिन्न बैंकहरुले नगद कारोबार कम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कोरोनाभाइरसले गर्दा देशभर डिजिटल पेमेन्ट र कारोबारको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ ।
यस्तोमा तपाईँलाई यो बुझ्न आवश्यक छ की डिजिटल पेमेन्ट कुन कुन माध्यम हो जसमार्फत तपाईँले सजिलो किसिमले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ ।
डिजिटल मोबाइल वालेट
देशमा धेरै नामका मोबाइल वालेटहरू छन् । डिजिटल मोबाइल वालेटहरू जस्तै इसेवा, खल्ती, आइएमइ पे, लगायत संचालनमा छन्, जसको माध्यमबाट तपाईंले सामानहरूका लागि डिजिटल भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ।
नगद भुक्तानीको सट्टा व्यक्तिहरू अब अनलाइन कार्ड भुक्तान गर्नमा जोड दिइरहेका छन् । यसको लागि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा नगदको सम्पर्क हुनबाट बच्न सकिन्छ। यस्तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डहरु बैंकमा खाता खोलेको बखतमा नै पाईन्छ ।
पछिल्ला दिनमा देशमा मोबाइल बैंकिङ्गको चलन एकदम तिब्रगतिमा बढेको छ र मानिसहरूले अधिकांश भुक्तानीको लागि मोबाइल बैंकिङ्ग पनि प्रयोग गर्न सक्दछन्। मोबाइल बैंकिङ्गमार्फत तपाइँको क्रेडिट कार्ड बिल भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनबाट बीमाको रकम तिर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। नगद लेनदेनबाट बच्न, चेक जम्मा गर्ने झन्झटबाट बच्नको लागि तपाईं आफ्नो सबै आवश्यक कामहरू मोबाइल बैंकिङ्गमार्फत गर्न सक्नुहुन्छ।
नेटबैंकिङ्ग वा ई-बैंकिङ्ग
मोबाईलमा एपमार्फत भुक्तान गर्नु बाहेक, मानिसहरुले नेट बैंकिङ्गमार्फत पनि आवश्यक सबै भुक्तानी गर्न सक्दछन्। यसको लागि, तपाईंको आफ्नो खाता भएको बैंकबाट नेट बैंकिङ्गको सुबिधा लिएको हुनुपर्दछ । त्यसपछि खाता भएको बैंकको नेटबैंकिङ्ग साइटमा जानुहोस् र यसमार्फत सबै आवश्यक भुक्तानीहरू गर्नुहोस्।
यी हुन् चीनका दोस्रो धनी व्यक्ति जो पहिले गूगलमा इन्जिनियरको रुपमा काम गर्दथे